ဆံပင်ညှပ်ခြင်းနှင့်သီးသန့်တည်ရှိခြင်း၊ ထိုးဖောက်ခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံရှိပါသလား။ | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဇွန်လ 12, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
သီတင်းပတ်နှစ်ပတ်အကြာကျွန်ုပ်၏ဒေသသို့လည်ပတ်သည် ကွမ်းခြံကုန်း။ ငါအမြဲတမ်းပြီးပြည့်စုံတဲ့ဖြတ်ကိုမရပေမယ့်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့၊ အဲဒီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ရှေးရှေးတွေကတကယ်ကောင်းတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ Supercuts သည်ကျွန်ုပ်မည်သူဖြစ်ကြောင်းကိုမှတ်မိခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်လမ်းလျှောက်သောအခါသူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏နာမည်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုတောင်း။ ၊ သူတို့၏စနစ်ထဲသို့ထည့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးဆံပင်ညှပ်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ၊ ကျွန်ုပ်ကြိုက်သလောက်နှင့်အတူမှတ်စုတစ်ခုပြန်ရပါသည်။ , တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရပ်နေ) ။
ကျွန်ုပ်ပေးထားသော (ပုဂ္ဂလိက) သတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ Supercuts နှင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးကျွန်ုပ်ကိုပြန်လာစေပါသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အယူအဆ။ မကြာခဏဆိုသလိုသူတို့သည်ငါ၏နာမကိုမှတ်မိသောနေရာများ၊ ကျွန်ုပ်ကော်ဖီကိုကြိုက်သည့်အခါ၊ ကျွန်ုပ်၏ရှပ်အင်္ကျီများအစွန်းပြောင်ခြင်း၊ ဆံပင်ညှပ်ခြင်းကိုပင်နှစ်သက်လေ့ရှိသည်။ ငါအတွေ့အကြုံဤမျှလောက်ပိုကောင်းသောကြောင့်, ငါထပ်ခါထပ်ခါလာ။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောဟိုတယ်အချို့တွင်ကျွန်တော်တည်းခိုခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏နာမကိုမှတ်မိရန်အချက်ပြသည့်အခါငါ့ကိုအံ့အားသင့်မိသည်။ အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုစီးပွားရေးပြန်လုပ်ဖို့နဲ့ချဲ့ဖို့အတွက်အားစိုက်ထုတ်မှုနည်းနည်းပဲ။ ဒေတာများကိုစုဆောင်းအသုံးပြုသောကုမ္ပဏီများသည်အောင်မြင်ပြီးတန်ဖိုးထားကြသည်။
ကျွန်ုပ်၏အွန်လိုင်းကိရိယာများ၊ ဆိုဒ်များနှင့်အလေ့အထများသည်မတူသင့်ပါ။ မှန်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုတစ်ခါတစ်ရံကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအွန်လိုင်းဆိုဒ်များနှင့်စနစ်များသို့တင်ပြပြီးသူတို့နှင့်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန်။ အမေဇုံ ကျွန်ုပ်၏ဝယ်ယူမှုကိုအနီးကပ်စစ်ဆေးပြီးနောက်တွင်ကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားနိုင်သောထပ်ဆောင်းပစ္စည်းများအားအကြံပြုသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ဘလော့ဂ်ကြီးတစ်ခုသို့သွားပါကပါ ၀ င်သည့်ပါ ၀ င်သော Google Adwords ကကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားသောကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုညွှန်ပြလိမ့်မည်။ သူငယ်ချင်းတစ် ဦး ၏မှတ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်မှတ်မိမည်။ ဆိုက်၊ ကျွန်ုပ်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုကွတ်ကီးတွင်သိမ်းထားနိုင်သည်၊ သို့မှသာကျွန်ုပ်သည်အချက်အလက်များကိုထပ်မံဖြည့်ရန်မလိုပါ။ ဒီဟာကကောင်းပါတယ် အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုအချိန်ကုန်သက်သာစေပြီးပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေရစေတယ်။ ယင်းသည်အားလုံးမဟုတ်ပါလော။
သင်၏အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေရန်အင်တာနက်ပေါ်တွင်သင်ထည့်သွင်းထားသည့်အချက်အလက်များနှင့်လုပ်ဆောင်မှုတိုင်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည် ထူးဆန်းသောပြaနာမဟုတ်ပါဘူး။ အချက်အလက်များကိုအလိုအလျောက်ကောက်ယူသည်။ သင်သည် cookies များကိုလက်ခံရန်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ login ဝင်ရန်၊ အခြားသူများကိုသုံးရန်သို့မဟုတ်အင်တာနက်နှင့်လုံး ၀ ဆက်သွယ်ဖို့မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ privacy ဆိုတာပြtheနာမဟုတ်ပါဘူး။ လုံခြုံရေးကတော့ကိစ္စပါ။ Privacy International သည်မကြာသေးမီကဂူးဂဲလ်အား 'privacy' တွင်အဆိုးရွားဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုပေးခဲ့သည်။ ငါဆောင်းပါးကိုဖတ်တဲ့အခါငါကလုပ်ဖို့ညံ့ဖျင်းသောအရာဖြစ်ခဲ့သည်ထင်ခဲ့တယ်။ ဂူဂဲလ်၏အချက်အလက်စုဆောင်းမှုသည်သုံးစွဲသူများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံများကိုတည်ဆောက်ရန်သာမကစီးပွားရေးနှင့်စားသုံးသူများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။
ကျော်ကြားသော Googler, Matt Cutts သည် Privacy International အားတုံ့ပြန်ခဲ့သည် အသေးစိတ်တုန့်ပြန်မှုဖြင့်ငါတကယ်ကိုသံရိုက်သည်။ ဂူးဂဲလ်ကလုံခြုံရေးနဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်အလုပ်လုပ်တယ်။ ဂူဂဲလ်ကလျှို့ဝှက်ဒေတာတွေကိုဖောက်ထွင်းခံရတာဒါမှမဟုတ်မတော်တဆပေါက်ကြားတာတွေအကြောင်းမင်းနောက်ဆုံးကြားဖူးတာဘယ်တုန်းကလဲ။
ဂူဂဲလ်သည်အချက်အလက်များကိုမည်သူ့ကိုမျှရောင်းချခြင်းမရှိပါ။ သူတို့၏မော်ဒယ်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏စနစ်ကို ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုရန်ဖြစ်သည်။ စားသုံးသူများက၎င်းကိုဆက်သွယ်ခွင့်ပေးသည်။ ဒါကမယုံနိုင်လောက်တဲ့ချဉ်းကပ်မှုနဲ့ငါ့ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နည်းလမ်းပဲ။ ကျွန်ုပ်၏ Google ကိုကျွန်ုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ များစွာလေ့လာစေလိုသည်မှာသူတို့၏ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံသည်နေ့စဉ်နှင့်အမျှပိုကောင်းလာခဲ့သည် ငါသူတို့အကြံပေးလိုသည့်ကုမ္ပဏီများနှင့်ငါဆက်သွယ်လိုလျှင်ကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားသောကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများရှိသည်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ International သည်ကျွန်ုပ်ဘယ်လောက်မကြာခဏလာရောက်လည်ပတ်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏မိသားစု ၀ င်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆံပင်ပုံသဏ္preာန်နှစ်သက်မှုဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ငါသူတို့ Supercuts သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းကိုရပ်တန့်ချင်လိမ့်မယ်ခန့်မှန်းတာပါ။ ထို့နောက်ငါလည်ပတ်သည့်အခါတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှင်းပြရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် ... ငါရပ်တန့်ခြင်းနှင့်သူတစ်စုံတစ် ဦး ကိုရှာတွေ့သည်အထိ ကိုပြု ခြေရာခံစောင့်ကြည့်ပါ။
ငါအောက်ဆုံးလိုင်းဒီ ... ကုမ္ပဏီများမှကြောင်းဆိုပါစို့ အလွဲသုံးစားမှု သင့်ရဲ့ဒေတာကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကုမ္ပဏီများမှ အသုံး သင့်ရဲ့ဒေတာကိုဆုချသင့်ပါတယ်။ ငါ့ကိုဂရုစိုက်ပါ။ ငါသင်ပေးအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုကြိုက်တယ်။
ဇွန် 12, 2007 မှာ 3: 39 pm တွင်
PS. ငါ ဘာမှလုပ်စရာ မလိုပါဘူး ဒီစာကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ…..b/c မင်းရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေက ငါ့အလုပ်ကွန်ပြူတာနဲ့ လက်တော့ပ်ပေါ်က ငါ့ကို သိပြီးသားပါ။ အဲဒါက သိပ်ကောင်းတာပဲ…….. အဲဒါက ငါ့အတွက် အရေးကြီးတယ်လို့ ခံစားရတယ်။
ဇွန် 12, 2007 မှာ 4: 30 pm တွင်
သငျသညျ များမှာ အရေးကြီးတယ်! 🙂